Public Health in Myanmar: Risk Communication
ကျန်းမာရေး အသိပညာ ပေးရာတွင် သတိပြုသင့်သော အချက်များ
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာ (၁၁)၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ လေယာဉ် အနုကြမ်းစီးပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အဲဒီအချိန်တစ်ဝိုက်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံက လူအများစုဟာ လေယာဉ် စီးရမှာကို ကြောက်ရွံ့ သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်လေးမှာလေယာဉ်စီးပြီး ခရီးသွားနေကျ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက လေယာဉ် မစီးတော့ဘဲ သူ သွားရမယ့် ခရီးကို ကားနဲ့ သွားဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ခရီးလမ်းမှာပဲ ကားတိုက်မှု ဖြစ်ပြီး သူမ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ကောက်ယူထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်း စာရင်း ဇယားတွေ အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ လေယာဉ် ကြောင့် သေဆုံးရမှုက ကားကြောင့် သေဆုံးရမှုထက် ပိုပြီး အန္တရာယ် နည်းပါးတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီအမျိုးသမီး ဘယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ် သင့်ပါသလဲ။
ဒါပေမယ့် လတ်တလော ဖြစ်ထားတဲ့ ကြောက်စရာ ဖြစ်ရပ်ကြီးကို စိတ်ထဲမှာ မထားဘဲ နည်းလမ်းတကျ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ပြောလို့ လွယ်သလောက် လုပ်ရတာ ဘယ်လောက် ခက်မယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
အဲဒီ ကြောက်စိတ်ရဲ့ အခြေအမြစ်တွေကို ကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက် မျှဝေတဲ့သူတွေ နားလည်ထားမှ အများ ပြည်သူကို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးတဲ့အခါ အကြောက်လွန်ပြီး အန္တရာယ် ပိုများတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မရွေးချယ်မိကြအောင် ကူညီနိုင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးရာမှာ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့ဖူးတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
“အေအိုင်ဒီအက်စ်သည် ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိ”၊ “အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်လျှင် သင် မုချ သေမည်” စတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးခဲ့ကြတဲ့အတွက် ကြောက်သင့်တာကို မကြောက်ဘဲ၊ မကြောက်သင့်တာတွေကို အကြောက်လွန် ခဲ့တာမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကြောက်သင့်တာက အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါပိုး ကိုယ့်ထံကို ၀င်ရောက်လာနိုင်မယ့် အပြုအမူတွေ။
မကြောက်သင့်တာက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးနဲ့ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်တွေ။
သူတို့က ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုယ့် အပြုအမူတွေကသာ ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာ။
ဒါပေမယ့် “သေကို သေမှာ၊ ကုလို့ မရဘူး”ဆိုတဲ့ စကားက လူတွေရဲ့ တွေးခေါ် စဉ်းစားနိုင်စွမ်းကို ကြောက်စိတ်နဲ့ ဖုံးပစ်လိုက်တဲ့ အတွက် ရောဂါ ရှိသူတွေ၊ ရောဂါပိုးနဲ့ နေထိုင်နေရသူတွေကို အသက်အန္တရာယ် ပြုတဲ့အထိ အဖြစ်ဆိုးတွေ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံရဲ့ ၃၂ ယောက်မြောက် သမ္မတဖြစ်တဲ့ ဖရန်ကလင်ရုစဗဲ့က “ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကြောက်စရာက ကြောက်စိတ်ပါပဲ “လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
လူတွေရဲ့ အန္တရာယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြားသိရချက်တွေ အပေါ်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုတွေကို သုတေသန လုပ်ရာက ရလာတဲ့ တွေ့ရှိချက် အချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
(၁) ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ပို သိရင် ပို ကြောက်တယ်။
(၂) အန္တရာယ်က ဘာတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို မသေချာရင် ပိုကြောက်တယ်။
(၃) အဲဒီ အန္တရာယ်က ကိုယ့်ဆီမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခံစားရရင် ပိုကြောက်တယ်။
(၄) အများစုက အန္တရာယ် တစ်ခု အကြောင်း ကြားရင် အဲဒါက တခြားသူတွေမှာပဲ ဖြစ်မှာပါ၊ ငါ့မှာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ တွေးလေ့ရှိကြတယ်။
(၅) အန္တရာယ်က အရင်က မဖြစ်ဖူး၊ မကြားဖူတဲ့ အန္တရာယ် အသစ် ဆိုရင် ပိုကြောက်တယ်။
(၆) တစ်နေရာတည်းမှာ အကြီးအကျယ် ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင် ပိုကြောက်တယ်။ ဥပမာ - တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးသူ အရေအတွက်က တစ်နေ့ အယောက်(၂၀၀၀) ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်က အယောက်(၅၀) ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လူတွေက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကို ပိုကြောက်ကြပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးတာက တစ်နေရာတည်းမှာ စုပြုံပြီး ဖြစ်ကြတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
(၇) အန္တရာယ်က ကိုယ်က လုပ်ယူတာမျိုး ဆိုရင် သိပ်မကြောက်ကြဘူး။ ဥပမာ - လိင်မှုကိစ္စ အပျော်အပါးလိုက်စားရာမှာ ကွန်ဒုံး မသုံးတာမျိုးလို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့။
(၈) အန္တရာယ်ကို ကိုယ်က ချုပ်ထိန်းနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ယူဆရင် သိပ်မကြောက်ကြဘူး။ ဥပမာ - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ခေါင်းဆောင်း မပါဘဲ စီးတာမျိုးပေါ့။
(၉) ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ် ပေးနိုင်မယ်၊ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ သူတွေကို ယုံကြည်ရင် သိပ်မကြောက်ကြဘူး။ မယုံကြည်ရင် ပိုကြောက်ကြတယ်။ ဥပမာ- အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရကို ယုံကြည်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုက အလွန်အကျွံ မဖြစ်ဘူး။ ၂၀၀၀ခုနှစ်မှာ နွားရူးရောဂါ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ဂျာမဏီနိုင်ငံက ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခဲ့ပုံက မှန်ခဲ့တဲ့ အတွက် လအနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေ ကြောက်စိတ် လျော့ပါးသွားပြီး အမဲသား ဈေးကွက်က ပုံမှန် ပြန်ဖြစ် သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အလားတူ ဖြစ်ရပ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုယ်တွယ် ဖြေရှင်းပုံ မှားခဲ့တဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အမဲသား ဈေးကွက်က တော်တော်နဲ့ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ် မလာခဲ့ဘူး။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေ အကြောင်း ပညာပေး မျှဝေတဲ့ အခါမှာ တစ်စုံတစ်ခုကို အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့် သွားအောင် ပြောမယ့်အစား သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေးပြီး လူတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်အောင် အကူအညီ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဖြစ်နိုင်ခြေ ဘယ်လောက်များသလဲ
- ဘယ်လို ကာကွယ်နည်းတွေ ရှိသလဲ
- ဘယ်လို ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိသလဲ
- အန္တရာယ်ဘယ်လောက် အထိ ကြီးနိုင်သလဲ
စတာတွေကို သေသေချာချာ နားလည်အောင် အကူအညီ ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် အများပြည်သူမှာ မိမိဘ၀အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းတွေ ပိုမို တိုးမြင့်လာပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ပိုမို ဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
(စာကိုး - Dealing with the dangers of fear: The role of risk communication by George M. Gray and David P. Ropeik. Health Affairs. Volume 21, No.6)
Posted by tune
Labels: Behavior change communication
This blog is jointly written byagroup of Myanmar Public Health Professionals.
To disseminate public health concepts and practices
To present contemporary international public health issues
To present and discuss public health problems of Myanmar
This blog is written using Zawgyi-One (Burmese partial Unicode) font. You would be able to see the messages in Burmese without requiring font installation if you use Internet Explorer.
ဒီဘလော့ဂ်က စာရေးသူအများ စုပေါင်းရေးတဲ့ ဘလောဂ်ဖြစ်ပြီး ပို့စ်တွေကို ပြန်လည် ကူးယူဖေါ်ပြလိုပါက ဘလော့ဂ်လိပ်စာနဲ့ စာရေးသူ နာမည်ကို အညွန်းထည့်ပေးပြီး ဘယ်သူမဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ဆင့်ပြန်ဖေါ်ပြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Unnoticed Kitchen Consequences (2)
Light Bulb & Candle
Answers for C-Box questions (1)
Reproductive Health Terminologies
Upstream and Downstream Approach
C-Box ပြောရေးဆိုခွင့် ...
C-Box မှာမေးခွန်းမေးသူများအနေနှင့် C-Box အောက်က ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် (Labels) တွေထဲမှာ မိမိသိလိုသည့် ရောဂါ (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုအကြောင်းရေးထားပြီးသား ပို့စ်ရှိမရှိ အရင်ရှာကြည့်ပြီး ရေးထားပြီးသားပို့စ် မရှိမှသာ C-Box မှာ မေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မိမိသိလိုသည့် အကြောင်းအရာကို ပို့စ်ထဲမှာဖတ်လို့ မရှင်းလင်းပါက ပို့စ်အောက်က Comment နေရာမှာ မေးခွန်း မေးနိုင်ပါတယ်။
Labels ကဏ္ဍအလိုက် အကြောင်းအရာများ
Behavior change communication (15)
Cervical Spondylosis (2)
Communicable disease (37)
Congenital disorder (3)
Dental health (11)
Down' syndrome (1)
Ebook Sharing (4)
Emergency condition (2)
Endometrial carcinoma (1)
Family Planning (9)
Gall stone (1)
Gastrointestinal system (7)
Genetics and Genetic Disorders မျိုးရိုးဗီဇ သဘာဝနှင့် ရောဂါများ (5)
Health Awareness (13)
health education (23)
့health education (5)
Health financing (6)
Health Information Management (3)
Health system (14)
Hepatobiliary system (6)
International Health (3)
Latest Medical Findings (3)
Medical negiligence (5)
Molar Pregnancy (1)
Multilateral donor (1)
Musculoskeletal system (8)
Myanmar Health News (3)
Neonatal Tetanus (1)
Non-communicable disease (17)
Nutrition အာဟာရ (27)
Participatory method (1)
Pharmacology ဆေးဝါးကဏ္ဍ (1)
Presenting numbers (1)
Q and A (31)
Reproductive Health (37)
Reproductive Health မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ (14)
Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ (9)
Reproductive System (15)
Research method (4)
Self learning (4)
Sex Education လိင်ပညာပေး (2)
Tropical disease (11)
သန္ဓေတားဆေးနှင့် သားဆက်ခြားနည်း (1)
HINARI (free e-journals)
HIV info: for Myanmar
HIV this week (UNAIDS official blog)
Ministry of Health (Myanmar)
NGOs in Myanmar
Public Health Dictionary